Famerenana ny famerenana amin'ny laoniny | Reef Resilience
Ireo mpandray anjara sy mpitantana ny haran-dranomasina dia mety maniry ny handinika ny famerenana amin'ny laoniny mba hanampiana amin'ny fanarenana ireo toerana misy haran-dranomasina simba na simba na toeram-ponenana mifandray amin'ny haran-dranomasina. Ny famerenana amin'ny laoniny ny ekolojia dia nofaritan'ny Fikambanana momba ny Famerenana amin'ny laoniny ho "ny dingana manampy amin'ny fanarenana ny tontolo iainana efa simba, simba na rava." ref
Tany aloha, ny tanjona amin'ny famerenana amin'ny laoniny dia ny hamerina ny tontolo iainana hiverina amin'ny fototra ara-tantara. Io fomba fijery io dia midika ihany koa fa azo esorina ny fandrahonana tompon'andraikitra amin'ny fahasimbana, ny fahasimbana na ny fandringanana. Na izany aza, mety tsy ho azo atao izany ho an'ny haran-dranomasina rehetra satria ny fandrahonana ny fiakaran'ny maripanan'ny ranomasina dia hitohy mandritra ny am-polony taona maro na dia tratra aza ny tanjona entona mandatsa-dranomaso. Noho izany, ny tanjon'ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina dia nifindra ho amin'ny fanatsarana ny fanarenana ny haran-dranomasina sy ny fitazonana ny fizotran'ny tontolo iainana, ny asany ary ny serivisy mandritra ny folo taona manaraka amin'ny fiovan'ny toetr'andro.
Inona no anjara asan'ny famerenana amin'ny laoniny?
Ny hetsika haingana sy mahery vaika hiatrehana ny fiovaovan'ny toetr'andro, na dia mitsikera tanteraka aza, dia ampahany amin'ny fitoviana lehibe kokoa amin'ny fiantohana ny ho avin'ny haran-dranomasina sy ny tolotra ara-tontolo iainana sy ara-toekarena omeny. Mihamitombo hatrany ny famerenana amin'ny laoniny ho fomba iray hanamafisana ny fanarenana ny tontolo iainana amin'ny haran-dranomasina amin'ny korontana, hanalefahana ny fahapotehan'ny haran-dranomasina, ary hanome tetezana hanohanana ny tontolo iainana amin'ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny fiovan'ny toetr'andro ho avy.
Ny famerenana amin'ny laoniny dia tokony ho ampahany amin'ny fitohizan'ny hetsika ampiasaina hanohanana ny toeram-ponenana, manomboka amin'ny fampihenana ny fandrahonana eo an-toerana ka hatramin'ny famerenana tanteraka ny asan'ny tontolo iainana. Ny fitsabahana dia azo raisina ho toy izao:
tompon'andraikitra voalohany (antsoina koa hoe fitsabahana “passive”) raha ny tanjon'izy ireo dia ny hamporisika ny fizotran'ny fanarenana voajanahary. Ohatra amin'ny fandraisana andraikitra mavitrika dia ahitana ny faritra arovana an-dranomasina sy ny fitantanana ny kalitaon'ny rano.
mamerina indray (antsoina koa hoe fitsabahana “mavitrika”) raha ny tanjon'izy ireo dia ny hanampy mivantana ny famerenana amin'ny laoniny ny asan'ny haran-dranomasina sy/na ny mponina, raha toa ka tsy ho tafarina ho azy izy ireo. Ohatra amin'ny fitsabahana mihetsiketsika dia ahitana ny fanaparitahana ny haran-dranomasina sy ny fambolen-kazo, ny fanesorana alga, na ny fanampiana substrate.
Sary © Center NOAA
Ny fomba famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina dia novolavolaina tamin'ny voalohany tamin'ny fomba nampiasaina tamin'ny tontolo iainana an-tanety. Ohatra, ny foto-kevitra momba ny 'fambolen-kazo haran-dranomasina' novolavolaina tamin'ny taona 1990 dia nampifanaraka ny foto-kevitry ny silviculture amin'ny fiompiana sombim-bato. ref Ny fomba hafa dia avy amin'ny fandraisana andraikitra vonjy maika taorian'ny korontana izay nisy fiantraikany teo amin'ny firafitry ny rafitry ny haran-dranomasina, toy ny fipetrahan'ny sambo na ny fihoaram-pefy tafahoatra. ref
Vao haingana, ireo mpahay siansa sy mpiaro ny tontolo iainana dia nanomboka nifantoka tamin'ny famolavolana teknika izay afaka manohana ny faharetan'ny haran-dranomasina manoloana ny fiovan'ny toetr'andro; na izany aza, maro amin'ireo karazana fitsabahana ireo no mbola ao anatin'ny dingana fikarohana sy fampandrosoana.
Fijerena ny fitsabahana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina ampiasaina amin'izao fotoana izao ho paikady fitantanana na amin'ny dingana samihafa amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana. Loharano: Hein et al. 2020
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoICRI Coral Restoration Hub
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCoral Restoration Consortium
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFandaharam-pamerenana sy fampifanarahana ny haran-dranomasina Aostraliana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFihetseham-po hampitomboana ny faharetan'ny haran-dranomasina nataon'ny Akademia Nasionaly momba ny Siansa Amerikana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTorolàlana UNEP/ICRI momba ny Famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina ho tetika hanatsarana ny serivisy momba ny tontolo iainanamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTaona-taonan'ny Firenena Mikambana momba ny famerenana amin'ny laoniny ny tontolo iainana